Ilay Maty Manao Fampielezankevitra : Mpiserasera Efa Maty No Mamoaka Hafatra Mpomba-Putin Ao Amin’ny Tambajotra Sosialy Rosiana Iray · Global Voices teny Malagasy
Ilay Maty Manao Fampielezankevitra : Mpiserasera Efa Maty No Mamoaka Hafatra Mpomba-Putin Ao Amin'ny Tambajotra Sosialy Rosiana Iray
Voadika ny 29 Desambra 2017 12:15 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Português, Español, Magyar, English
Hafatra mpankafy Poutine mitovy maro no nozaraina tao amin'ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosiana iray; maro tamin'ireo mpampiasa izay ny mombamomba azy dia nizara ireo hafatra ireo no novonoina. Petaka avy amin'ny mpanoratra Alexey Kovalev
Tamin'ny Zoma 15 Desambra, andro iray taorian'ny fihaonana amin'ny mpanao gazety fanaony isantaona, nanaovan'i Vladmir Poutine fanambarana fa hirotsaka amin'ny fifidianana ihany izy amin'ny 2018, tondraka hafatra nidera ny filoha ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosiana lehibe. Notanisain'ireo an-jatony,mpampiasa Vkontakte niaraka tamin'ny tenifototra #ПутинКрут (#MilayIPoutine), ny tenin'olona avy tao amin'ilay fihaonana tamin'ny mpanao gazety.
Iray ihany no olana tao: efa elabe ny maro tamin'ireo mpiserasera ireo. Tohina avokoa ireo nahafantatra ny tompon'ireo pejy Vkontakte novelomina ireo fahavelon-dry zareo, raha nahita ireo pejin'ny namany sy havany niverina niasa indray taorian'ny volana sy taona maro hatramin'ny hafatr'izy ireo farany.
Tao anatin'ny taona maro no efa tsy nizara na inona na inona ny vehivavy iray, izay nanasongadina hafatra mpomba-Poutine vao haingana ny mombamomba azy ao amin'ny Vkontakte. Andro vitsivitsy, anefa, toa niverina niasa tampoka teo indray ilay kaontiny, nizara tenin'i Poutine naverina niaraka tamin'ilay tenifototra #ПутинКрут tany amin'ireo pejinà vondrom-piarahamonina Vkontakte maro. Olona iray, angamba havany izay mbola afaka niditra tamin'ny kaontiny, no nizara hafatra nampahafantatra ireo mpanaraka azy fa efa maty tamin'ny 2013 i Lyudmila.
Natsahatra avy hatrany ny ankamaroan'ireo kaonty Vkontakte an'olona Rosiana efa maty ireo izay ankehitriny mizara hafatra mpomba-Poutine. Rehefa natonin‘ny mpanao gazety mba haneho hevitra, nilaza ny mpitantana ny Vkontakte fa nojirihan'ireo mpijirika tsy fantatra ireny kaonty ireny.
Tsy mahagaga, Rosiana maro no tsy nihontsona tamina tetika fampielezankevitra mampiahiahy tahàka izao:
История с массовой публикацией тега #ПутинКрут во Вконтакте с аккаунтов умерших людей настолько мерзкая, что я даже не знаю, что они там будут творить когда кампания официально начнется. Так-то дно уже пробито.
Tena maharikoriko ilay tranganà famoahankafatra niaraka tamin'ilay tenifototra #ПутинКрут, tao amin'ny Vkontakte, avy amin'ny kaontin'olona efa maty ka tsy vitako akory ny hietritreritra hoe inona indray no ho entin-dry zareo rehefa tena atomboka amin'ny fomba ofisialy ny fampielezankevitra. Na izany na tsy izany, efa ela isika no tafalatsaka lalina.
«В российской соцсети обнаружили записи с хештегом #ПутинКрут со страниц давно умерших людей»
”Hita tao amin'ny Vkontakte, tambajotra sosialy Rosiana, ny hafatra avy amin'ireo mpiserasera efa maty elabe, izay mitondra ny tenifototra #ПутинКрут”.
Ohatr'ity no bikan'ilay fanohanana tena malaza: na ny maty aza mbola maka ny tsar.
Maro tamin'ireo sary misy ny tenin'i Poutine naverina izay nozarain'ireo kaontina mpiserasera efa maty ireo no mitondra ilay fangon'i Molodaya Gvardiya (Ny Tanora Mpiambina an'i Rosia Miray), ny sampana tanora ao amin'ilay antoko Rosiana mitondra ankehitriny. Raha namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety momba ilay zava-nitranga, nandà ny fandraisany anjara tamin'izany i Anna Rogacheva mpitondra tenin'ilay fikambanana ary nanome tsiny ireo hafatra ”lolovokatra” ho an'ireo ‘mpihantsy tsy fantatra’.
Voaloton'ny resabe ny tantaran'i Molodaya Gvardia amin'ny maha hetsika tanora mpomba-Poutine azy. Tamin'ny 2010, mpikatroka roa, izay taty aoriana ny iray tamin'izy ireo lasa mpikambana tao amin'ny parlemanta Rosiana, dia nihanjahanja taorian'ny nandoroany kirihitra iray sy mody namono ilay afo no sady nandefa bitsika tezitra be momba izany— tao anatin'ny olam-pirenena momba ny doro ala.
Ny iray tamin'ireo mpitarika ny hetsika, ankehitriny mpandraharaha ara-polotika lehibe ao amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, dia voalaza ho nanome baiko ny fanafihana mahery vaika nanjo mpanao gazety malaza iray.
Rehefa nanao jery todika ny laza miovaovan'ny Molodaya Gvardia, vitsy ireo resy lahatra tamin'ny tohan-kevitry ny mpitondra tenin'i Rogacheva:
Кто бы сомневался.Конечно это мертвые с косами воскресли, только чтобы в сетях выразить свою любовь к вождю. Чет “Мертвые души” вспомнились.Комедь?
Milaza ny \_Tanora Mpiambina avy ao Rosia Miray fa tsy misy idiran-dry zareo ny amin'ireo hafatra navoaka tamin'ny kaontina mpiserasera efa maty
Fa mazava ho azy. Nitsangana avy tao anaty tany niaraka tamin'ny antsim-pinjinjany teny an-tànany mba haneho fotsiny ny fitiavany ny mpitondra antsika ireo maty ireo. Tonga ao an-tsaina [ ilay tantara malaza nosoratan'i Nikolay Gogol] ireo Fanahin'ny Maty. Tena ohatry ny hatsikana ity izy?